बालबालिकाको स्मरण शक्ति बढाउन के गर्ने ? « Mero LifeStyle
बालबालिकाको स्मरण शक्ति बढाउन के गर्ने ?
मानिस शारीरिक र मानसिकरूपमा तन्दुरुस्त हुन अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ । स्मरण शक्ति वा सम्झिने क्षमता धेरै होस् भन्ने इच्छा सबैको हुन्छ तैपनि धेरैलाई यो समस्याले पिरोल्छ । विशेषगरी कतिपय बालबालिकाहरु पढाएको, भनेको, सम्झाएको कुरा राम्ररी बुझ्दैनन् भने कतिले चाडै बिर्सन्छन् । बच्चाहरुले पढेका, देखेका, सुनेका कुरा कति सम्झन सक्छन् भने कति बिर्सन सक्छन् ।
यदि तपाईको बालबालिकामा पनि स्मरण शक्तिमा समस्या छ ? त्यस्तो छ भने बालबालिकाको स्मरण शक्ति बढाउन के के कुरामा ध्यान दिने भन्ने विषयमा मनोविद् डा. नरेन्द्रसिंह ठगुन्नाको सुझाव यस्तो छ :
– अहिले धेरै बालबालिकाहरु मोबाइल तथा ल्यापटपमा व्यस्त हुन्छन् । जसले बालबालिकाको रचनात्मक क्षमतालाई घटाइरहेको छ । त्यसैले बालबालिकालाई मोवाइल ल्यापटपमा धेरै व्यस्त गराउनुभन्दा रचनात्मक कार्यमा लगाउनुपर्छ । जस्तै ः उनीहरुसँग खेलौना छैन भने आफैँ खेलौना बनाउने र खेल्ने गर्दा उनीहरुको स्मरण शक्तिमा स्फूर्ति आउँछ ।
– विद्यालयका शिक्षकहरुले के पढाउने र कसरी पढाउने तथा कसरी पढाउँदा बालबालिकाले ती कुरा स्मरण गर्न सक्छन् भन्ने किसिमले पढाएको खण्डमा पनि उनीहरुले पढेका धेरै कुरा स्मरण गर्न सक्दछन् ।
– बालबालिकालाई रुचि भएको विषयमा उनीहरुलाई संलग्न गराउन सकियो भने पनि उनीहरुले त्यसलाई ध्यानपूर्वक याद गर्छन् । साथै, स्मरण शक्ती बढ्न सक्छ ।
– व्यायाम तथा ध्यानको अभ्यासले हाम्रो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्छ । त्यसैले बालबालिकालाई ध्यान गर्ने बानी बसाउन सकियो वा स्मरण शक्ती बढाउने खेलहरु जस्तैः चेस, शब्दकोश खेलाउन सकियो भने उनीहरुको स्मरण शक्ती बढ्छ ।
– बालबालिकाले पर्याप्त मात्रामा निन्द्रा नपाउँदा पनि उनीहरुको स्मरण शक्ती घट्छ । बालबालिकाको उमेरअनुसार पर्याप्त मात्रामा निन्द्रा पुग्यो भने उनीहरुको मन र शरीर दुवै तन्दुरुस्त हुन्छ जसले गर्दा स्मरण शक्ती बढ्छ ।
– स्मरण शक्ती वृद्धि गर्ने विषयमा हाँसोको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यदि बालबालिकाहरु प्रयाप्त मात्रामा हाँसे रमाए भने उनीहरुको ब्रेन रिवार्ड सिस्टम सक्रिय हुन्छ । जसले तनाव कम हुन्छ र ताजापन महसुस गर्छन् । त्यस्तो बेला गरेको कार्यहरु उनीहरुले लामो समयसम्म याद गर्न सक्छन् ।
– खानपानले पनि स्मरण शक्ति बढाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छ । जंक फुडको सेवनले बालबालीकाको स्मरण शक्तीमा असर गर्न सक्छ । त्यसैले उनीहरुलाई सन्तुलित आहार जस्तै ः प्रयाप्त मात्रामा तरकारी, फलफुल, माछामासु, दूध दही र बदाम आदि खान दिनुपर्छ ।
– उमेरअनुसार बालबालिकाको सिक्ने क्षमता छुट्टा–छुट्टै हुन्छ । त्यसैले अभिभावकहरुले बाल मनोविज्ञानलाई बुझेर उनीहरुको क्षमता र रुचि अनुसारको कुरा सिकाउनु पर्छ ।
– हामीले बालबालिकाको भावना शेयर गर्ने मौका दिएका हुँदैनौ । त्यसैले उनीहरुसँग कुराकानी गर्ने, निर्णय कसरी लिने, प्रतिक्रिया कसरी जनाउने जस्ता कुराहरु सिकाउनु पर्छ । यसले पनि उनीहरुको स्मरण क्षमता वृद्धि गर्न मद्धत गर्छ ।
#डा. नरेन्द्रसिंह ठगुन्ना